ku dhawaad 12 qof ayaa ku dhimatay laba Qarax oo ka dhacay Suuqa Gikomba ee magaalada Nairobi Kenya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka ku dhawaad 12 qof ayaa ku dhimatay laba Qarax oo ka dhacay...
ku dhawaad 12 qof ayaa ku dhimatay laba Qarax oo ka dhacay Suuqa Gikomba ee magaalada Nairobi Kenya
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya laba qarax oo shalay ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, qaraxyadaas oo is xigxigay ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 12 qof halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 80 qof, kuwaas oo isugu jiro dhaawacyo culculus iyo kuwa fud fudud.
Hey’ada musiibooyinka qaranka ee dowladda kenya ayaa sheegtay in qaraxyada kan koowad uu ka dhex dhacay gaari nuuca dadweynaha qaada, halka kan kale uu ka dhex dhacay gaari nuuca yar ee raaxada ah.
Waxaana la sheegaya ilaa hada in laba qof loo xiray qaraxyadaas oo looga shakiyay in ay geesteen kana danbeeyen qaraxyadaan.
Maamulka hospitalka qaran ee Kenyata, ayaa waxaa uu xaqiijiyay dhimashada 10 qof iyo dhaawaca 80 ka ah, isaga oo ugu baaqay dadweynaha dalka Kenya in ay bixiyaan kuna deeqaan dhiigooda si loogu gargaaro dhibanayaasha ku waxyooloobay qaraxyada argagixisnimo.
Qaraxyadaan ayaa kusoo beegmaya xili dowladdaha Maraykan, Faransiiska iyo Biritin ay uga digeen dalxiisayaasha u dhashay dalalkaas qaraxyo kadhaco magaalooyinka ay dalxiiska u tageen sida Mombasa, isla markaana waxaa laga daad gureey magaala xeebeedka Mombasaku dhawaad 200 oo u dhashay dalka Biritin.
Waxaana isla markiiba ka jawaabay digniintaas iyo daad gureynta dowladda Kenya, waxa ayna arintaas ku tilmaantay cabsida laga digay mid aan jirin, iyada oo sheegtau in aysan jirin wax baqdin ah oo laga qabo argagixisada goobaha dalxiiskuna ay yihiin kuwa ammaan ah.
Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Kenya, oo shir jaraa’id ku qabtay aqalka madaxtioyada daqiiqado kadib markii qaraxyadu dhaceen, ayaa sheegay in argagixisnimadu aysan ahayn dhib ugaar ah dowladda Kenya, balsa ay tahay dhibaato caalami ah taas oo loo baahan yahay in dunidu u midowdo.
Previous articleWar deg deg ah: Xukuumada Soomaaliya oo wufufud u direyso Balad xaawo kadib dagaaladi shalay
Next articlexiisad colaad oo ka taagan Khaatuma Taleex